अरूलाई सहयोग गरेर कहिले गरिब भइदैन! - Blogs of Sagar Prasai
अरूलाई सहयोग गरेर कहिले गरिब भइदैन!
Zinc Sheet given to heads of five families of Kumari-4, Nuwakot who are extremely poor.
केहि दिन अगाडी मेरो अफिसका सहकर्मी साथी ईश्वरले आफ्ना गाउँमा रहेका अति बिपन्न पाँच परिवारका बारेमा मलाई सुनाए। गाउँका अरू ले दुख सुख आफ्नो बस्ने टहरा बनाउदै गरेका भएपनि यी पाँच परिवार सँग सम्पतिको नाम केहि पनि बाँकि नभएको र बाँच्न पनि राहतको मात्र भर भएको रहेछ। उनीहरूको सबभन्दा महत्वपुर्ण आवश्यकता भनेको टहरा छाउन चाहिने जस्ता पाता रहेछ। ईश्वरले मलाई भनेका थिए- जसरी भएपनि उनीहरूको लागी कम से कम एक एक बन्डल जस्ता पाता किनेर दिन पाए, उनीहरू सबै मिलेर एउटा लामो टहरा बनाएर त्यसमा नै मिलेर बस्ने थिए।
त्यसको केहि दिन मैले मेरा केहि साथीहरूलाई यो कुरा सुनाए र सहयोगको अपिल गरेँ र सहयोग पनि जुट्यो। हिजो ईश्वरलाई साथ लिएर म, मेरी श्रीमति र मेरो भाई धादिङ्गको धार्के भन्ने ठाउँ पुग्यौ। ईश्वरको गाउँ सम्म जान हामीलाई धेरै गार्हो हुने भएकाले हामीले ती पाँचै परिवारका मुलीलाई त्यहि बोलाएका थियौ। धार्के कै एउटा पसलमा वहाँहरू प्रत्यकलाई ११ पाता का दरले जम्मा ५५ पाता जस्ता पाता किनेर दियौँ। पसले को सल्लाहमा जस्ता पातामा धेरै समय सम्म टिक्ने २४ गेजको जस्ता पाता किन्यौ र त्यसले गर्दा हामीले सोचेको भन्दा केहि महंगो पर्न गएकाले प्रत्यक बन्डलबाट १/१ पाता कम खरिद गर्नु पर्यौ। ५५ पाता को जम्मा रु. ३२,२०० (बत्तिस हजार दुई सय रुपैया) पर्यो।
यसरीले हामीले आफ्नो र केहि साथीहरूको व्यक्तिगत सहयोगमा नुवाकोट जिल्लाको कुमरी गाविस वडा नं ४ मा रहेको डाडाँगाउका युद्द प्रसाद पुडासैनी, नेत्र प्रसाद ढकाल, मोहनविक्रम पनेरू, पुष्ष राज पुडासैनी र युवर्ण कुमार पुडासैनी का नया बन्ने अस्थायी टहराको लागी जस्ता पाता सहयोग गर्यौँ। मलाई विश्वास छ, यो बर्षाको मौसम सकिएपछि जब बिस्तारै यी पाँच परिवारले नया स्थायी घर बनाउन थाल्ने छन्- यिनै जस्ता पाता त्यो बेला पनि प्रयोग हुनेछ।
छुट्टिने बेलामा युद्द प्रसाद पुडासैनीले मेरो हात समातेर भने-“तपाई कहाँ कहाँको मान्छे सहयोग गर्नुभयो बाबु! हामीलाई धेरै राहत भयो। धन्यवाद!” मैले भने- “तपाईलाई पो धन्यवाद। तपाईहरूले गरेर हामी सबै जनामा झन् मानवता थपिएको छ आजकल।“ यति भनेर उनी र उनका साथीहरू सँग बिदा मागेर हामी काठमाडौँ फर्कियौँ।
जर्मनीमा एउटा भनाई छ रे- “मसँग पहिला जति थियो- त्यो खर्च भयो, मैले जति बचाएको थिएँ- त्यो सब गुम्यो; मैले जति अरूलाई दिन सके- त्यो नै हो मसँग सदैव रहने।“ हामी सबै सँग पनि अहिले भएको वा जोगिएको सम्पत्तिको के भर! सधै भरी समृतिमा रहने र फर्किएर आएर खुशी बनाउने त अरुलाई गरिने सहयोग नै हो।
त्यसकारण यो बेलामा अरूको लागी जति सकिन्छ मद्दत गरौँ किनभने एन फ्रान्कले भनेजस्तै- कोहि पनि अरूलाई सहयोग गरेर कहिले गरिब हुदैन।